China TS Manual latabatra fandidiana Hydraulika ho an'ireo mpanamboatra sy mpamatsy hopitaly | Wanyu
Tsy mitovy amin'ny latabatra fiasan'ny boky ankapobeny, mampiasa rafitra manainga hydraulic sy lohataona gazy izahay hanitsiana ny lovia lamina sy tongotra. Ataovy mangina sy mety ny fizotran'ny fanitsiana.
Ny fototra miendrika Y dia ampiasaina mba hahazoana antoka fa ny latabatra fandidiana hydraulic dia manana fahamarinan-toerana avo kokoa sy toerana malalaka, mba hahafahan'ny mpiasan'ny fitsaboana manatona ilay marary amin'ny halaviran'ny aotra.
Ny famolavolana ny kodiarana lehibe koa dia mahatonga azy io hiady amin'ny hovitrovitra sy hamongorana mandritra ny hetsika.
1. Foana fahatsiarovana mandroso
Ny fitaovana ambonin'ilay latabatra fandidiana hydraulic dia tsy mahazaka afo sy anti-static. Ny kidoro polyurethane (PU) miolakolaka dia mora diovina ary manana androm-piainana maharitra.
2. Tetezana voa voaorina.
Ampidiro ao anaty lavaka mifandraika ny tahony, ahodina ny tahony ary ataovy miakatra na midina amina toerana mety ny tetezana andilana, avy eo sintomy ny tahony. Ho an'ny latabatra fiasan-tsolika TS, ny haavon'ny tetezana valahana dia mihoatra ny 100mm.
3. Ampidirina Hydraulic System
Ny rafitra hydraulic nafarana avy any Amerika dia mahatonga ny fivezivezin'ny latabatra fiasan-tanana miorina sy haingana.
4. Angular Adjustments with Gtoy ny Springs
Na ny takelaka ambadika na ny vilia takelaka misy ny latabatra fiasan-tsolika TS dia miaraka amina rafitra fanohanana vovo-tsolika entona, izay manao fanitsiana isan-karazany malefaka, mangina ary tsy misy hovitrovitra, sady miaro tsara ny firafitra iraisana ary misoroka ny marary tsy hianjera.
5. Lfamolavolana arger caster
Ny fototry ny latabatra fandidiana hydraulic hydraulic dia natao miaraka amina casters lehibe (savaivony ≥100mm), izay mora mihetsika. Miakatra ny casters rehefa mihodina, ny fotom-pandriana dia mifamatotra mafy amin'ny tany, ary tsara ny fitoniana.
3. Rafitra Hydraulika nafarana
4. Fanitsiana Angular amin'ny Gas Springs
5.Larger caster lehibe kokoa
Model item Tabila fiasana Hydraulika TS
Ny halava sy ny sakany 2050mm * 500mm
Fiakarana (ambony sy ambany) 890mm / 690mm
Takelaka lohany (ambony sy ambany) 60 ° / 60 °
Takelaka miverina (ambony sy ambany) 75 ° / 15 °
Takelaka tongotra (ambony / ambany / ivelany) 30 ° / 90 ° / 90 °
Fihodinan'ny sisiny (havia sy havanana) 20 ° / 20 °
1 Efijery fanatoranana 1 Piece
2 Fanohanana ny vatana 1 Pair
3 Fanohanana amin'ny sandry 1 Pair
4 Fitsaharana soroka 1 Pair
5 Knut Crutch 1 Pair
6 Fixing Clamp 1 Mametraka
8 Fehin-kibo 1 Mametraka
Previous: TDY-1 China Electric vidin'ny latabatra fandidiana ho an'ny hopitaly
Manaraka: LEDD500 / 700C + M Ceiling valin-drihana LED Dome Double Dome Fitaovana ao amin'ny efitrano fakan-tsary
TY Stainless Steel Manual Hydraulic Surgery Tab ...
TS-1 Stainless vy mekanika hydraulic hydraulic ...